TAARIIKHDA XIDIGA KUBADA CAGTA EE CRISTIANO RONALDO (QAYBTII 3AAD) –
Home Cristiano Ronaldo TAARIIKHDA XIDIGA KUBADA CAGTA EE CRISTIANO RONALDO (QAYBTII 3AAD)
TAARIIKHDA XIDIGA KUBADA CAGTA EE CRISTIANO RONALDO (QAYBTII 3AAD)
Xariif.net-Halkan waxan kasii wadi doonaa Taariikhda xidiga kubada cagta ee Cristiano Ronaldo,Qaybtii 3aad
Sanadkii 2011-12 Ronaldo ayaa Madrid ka caawiyey inay qabato horyaal La Liga ah, waxaana uu dhaliyay 46 gool xilli ciyaareedkan horyaalka. Waxa uu dhaliyay 66 gool 56 kulan oo uu u saftay Madrid iyo xulka Portugal ee 2013 isagoo ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka sannadka adduunka ee FIFA.
Sanadkii 2014 waxa uu dhaliyay 52 gool 43 kulan oo uu u saftay Real Madrid tartanka Champions League, taasoo keentay in Ronaldo uu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d’Or.
Sanadkii 2014-15 wuxuu dhaliyay 48 gool inuu hogaamiyo gooldhalinta horyaalka La Liga.
Ronaldo ayaa dhaliyey goolkiisii ​​324aad isagoo ah xubin ka tirsan Real bishii October 2015 si uu u noqdo gooldhaliyaha guud ee gooldhalinta kooxda. Waxa uu dhaliyay 35 gool oo La Liga ah xilli ciyaareedkii 2015-16, wuxuuna ka caawiyay Real Madrid oo ku guuleysatay horyaalkeedii 11aad ee Champions League, Bishii December 2016 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or .
Ronaldo ayaa 42 gool u dhaliyey Real Madrid tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii 2016-17, wuxuu u qaaday kooxdiisa horyaalka La Liga iyo Champions League xilli ciyaareedkan, taasoo keentay inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d’Or shanaad.
Sanadkii 2017-18 wuxuu dhaliyay 44 gool 44 kulan, Real ayaa ku guuleystay horyaalkii seddexaad ee Champions League. Bisha July ee sannadka 2018, wuxuu gaaray heshiis afar sano ah oo gaaraya 112 milyan oo doolar (ku dhowaad $ 132 milyan) oo uu u wareegey kooxda ugu awooda badan Talyaaniga ee Juventus. Wuxuu xirfadiisa ciyaareed ee Real madrid ku dhameystay 311 gool 292 kulan.
Dhanka xulkiisa Qaranka portugalka
Ronaldo ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday xulka qaranka Portugal oo uu ka dhaliyay Kazakhstan bishii August 2003 (afar maalmood ka dib markii uu kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay United).
Waxa uu ahaa ciyaaryahan muhiim ah oo ku dhameystay booska afaraad ee Portugal ee Koobka Adduunka 2006 wuxuuna noqday kabtanka waqtiga buuxa ee xulka qaranka 2008dii.
Sannadkii 2012-kii wuxuu kubad qaabeeyaa Portugal u qaaday Portugal semi-finalka Koobka Yurub, halkaasoo xulkiisa Spain looga saaray xulka Spain oo ciyaaray kulan lagu ganaaxay rigoore.
Ronaldo ayaa ka mid ahaa ciyaartoyda adduunka ee sannadkaa, laakiin ciyaartiisii ​​uu ku guuleystay tartanku wuxuu ahaa mid culus, kooxda reer Portugal oo dhan ayaa ku dhibtooneysay inta lagu gudajiro wareega group-yada.
Sannadkii 2016 ayuu Portugal ka caawiyay inay ku guuleystaan ​​Koobka Yurub, koobkiisii ugu horeeyay ee heer caalami ah, inkastoo uu si aad ah aanu u ciyaaray finalka, sababtoo ah dhaawac jilibka ah oo soo gaaray xilli danbe.
Ronaldo ayaa si wanaagsan u ciyaarey koobkii aduunka ee 2018, isagoo dhaliyay afar gool afar kulan oo uu u ciyaaray Portugal, waxaana uu ku soo baxay wareega 16ka.
laso Qaybta 4aad Taariikhda Ronaldo